Fiainana voasoratra mialoha?
2008-10-02 @ 16:04 in Ankapobeny
Zavatra mampieritreritra ahy mandrakariva amin'ny fiainako manokana indray no hotantaraiko eto. Fahakely aho dia manana izao tranga manaraka izao: amin'ny atoandro aho dia manana ny fiainako andavanandro, amin'ny alina ihany koa anefa dia toy ny manana fiainana mitohy anaty nofy (izay efa nanaraka ny bolongako hatramin'ny roa taona sy tapany izao mety efa nahalala tranga hafa). Ahoana moa izany? Ny atoandro toy ny an'ny olona rehetra ihany... mitohy ny fiainana, ny alina kosa raha nanonofy zavatra na fiainana iray aho omaly halina dia nitohy halina iny nofy iny. Toy ny hoe matory amin'ny fiainana eto an-tany aho fa nifoha kosa tamin'ny fiainana ara-nofy. Tsy nofy teren'ny saina hoe ataoko tahaka izao na tahaka itsy fa toy ny fiainana andananandro ihany koa. Fa ity eto ity no sambany niaraka tamin'ny sary. Saripika nalaiko tany Mahajangà nandritra ny fiarahan'ny namana serasera dago (NSD) nandritra ny fiovana rivotra tamin'ny volana aogositra teo.
Toerana iray teo an-tampontanànan'i Mahajangà. Tsy dia tiako holazaina loatra hoe aiza marina fa aleo amin'izao. Niserana teo anoloan'ireto zazavavy ireto aho no niantsoantso ahy ilay zandriny indrindra. "Eh! Piho sary izahay". Hitany manko ny fakantsary niomerika teny an-tanako. Tsy naka sarotra aho satria fanaon'ny ankizy aty mihitsy ny mangataka alaina sary dia jereny avy eo ny sary. Eo amin'ny lafiny zon'olombelona izany dia nandika lalàna aho. Ny resaka nifanaovanay no nahatadidiavako fa efa niainako tamin'ny nofy fahazaza ity tantara ity. Tadidiko tsara manko ny resaka tamin'ny nofy ary naverin'ilay zaza (zandriny indrindra) soa amantsara. Rehefa niantso ahy ary ilay zaza ka niangavy ahy halaina sary dia hoy aho nanontany hoe:"Ianao irery sa ianareo rehetra ireo?" Namaly ilay zaza hoe izahay jiaby. Nanontany ireo zokiny aho: Ekenareo ve izany? Izay izany! hoy ny iray. Eny ary ho'aho. Nopihina ny sary ka rehefa naseho azy rehetra dia nojeren'ilay zandriny indrindra akaiky dia norohany teo amin'ilay sary amin'ny fakantsary. Nihoraka izahay rehetra nanatrika teo.
Fa naninona no norohanao ny sary? tsy tadidiko intsony izay nanontany na saiky niara-nanontany izahay rehetra. Tiako be ny sary, hoy izy namaly tsy taitra. Notohizany avy eo, sady tiako i..., tiako i... sady nanondro ireo "zokiny" tsirairay izy. Tiako aho. Tiako jiaby izy rehetra ireo. Hay... hoy aho nahatsiaro indrindra ilay nofy.
Ny tamin'i Nofy ve? izaho no teo amin'ny toeran'ilay zandriny indrindra niteny tsirairay ny anaran'ireo zazavavy nanodidina azy. Tadidiko tsara fa olona fotsy be iray ilay noresahiko, noheveriko vazaha aza raha ny eritreritro tao amin'ilay nofy ilay olona nanatona anay. Izay ilay zava-nitranga nahavariana ahy. Sambany aho hatrizay niainako no tany Mahajangà nefa toy ny efa fantatro ihany fa hisy zavatra mitranga tsy dia mahazatra niandry ahy tamin'ity toerana ity. Nanaraka izay dia nisaraka izahay, nandray fiara fitaterana aho hody. Teo amin'ny fiatoana voalohany dia tsaroako tsara indray ilay nofy fa toy ilay niainako indrindra. Nisy hafatra nomena ahy tamin'ny nofy fa tsy tadidiko intsony amin'izao fotoana izao. Raha nifoha aho tamin'ny andro nanofisako ity tranga ity dia tadidiko tsara ilay hafatra fa efa adino tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Ny hany eritreretiko amin'izao fotoana izao dia hoe nosoratako ve ilay hafatra nomena ahy tamin'io fotoana io?